Badweyntimes.com » AKHRISO: Al shabaab oo Agagaarka VILLA Somalia ku daadiyay Warqado Digniin ah…Badweyntimes.com
AKHRISO: Al shabaab oo Agagaarka VILLA Somalia ku daadiyay Warqado Digniin ah…
Feb 7, 2017 - jawaab
Sida ay sheegayaan dad Arkay Warqadaha Kooxda Al-shabaab ayaa warqado digniin ah ku daadiyay hareeraha Xarunta Baarlamaanka & Madaxtooyada Soomaaliya.
waxaa ku qornaa Warqadaha Al shabaab in ay daadiyeen loo maleynayo in ay weeraro ka geysan doonto agagaarka Xarunta Baarlamaanka, Madaxtooyada iyo dhammaan goobaha muhiimka ah ee saaran wadada Makka Al-mukarama ee magaalada Muqdisho.
Warqadaha ayaa waxaa ku cadaa in dadka deegaanka looga digaayo inay ka guuraan agagaarka xarunta baarlamanka,gaar ahaan waxa ay digniintaasi ku soctay dadka ku nool buushashka dhabarka danbe kaga yaal Xarunta Golaha Shacabka.
Kooxda waxa ay warqadaasi ku cadeysay inaan lagu eedi doonin haddii dadka Masaakiinta ee ku nool goobaha wax lagu daadiyay ay waxyeelo kasoo gaarto talaabadooda, sida ku xusan warqadaha.
Dowlada Somalia kama aysan hadal falkaasi, waxa ayna Su’aashu tahay sababta ka danbeysa in Ciidamada Dowlada ay ogaan waayaan Warqadahaasi la daadiyay maadaama goobaha lagu daadiyay ay dhooban yihiin Ciidamo iyo shaqaale ka tirsan Dowlada.
DEG DEG:MD Xasan hada Muqdisho kusoo bandhigay Cududiisa siyaasadeed iyo xildhibaanada oo heysto garaayo ilaa
XOG: Keating oo soo Faragaliyay Howsha Guddiga Doorashada & Jawaari oo si Geesinimo leh…